12 रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा रूस > 12 रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू
पार साइबेरियाई टाइगा, सबै भन्दा पुरानो ताल Baikal, जंगली कामचटका मास्को, यी 12 रूसमा भ्रमण गर्नको लागि अचम्मका ठाउँहरूले तपाईंको सास फेर्नेछ. केवल तपाईंको यात्राको तरीका छनौट गर्नुहोस्, तातो मौसमका लागि न्यानो पन्जा वा रेनकोट प्याक गर्नुहोस्, र रसियामा हामीलाई पछ्याउनुहोस्.
1. अल्ताई पर्वतहरू
रसिया बीच, मङ्गोलिया, चीन, र कजाकिस्तान अल्ताई क्षेत्रको घर छ 700 पोखरी, वन, र माउन्ट बेलुस्काको उच्च साइबेरियाली चोटी, मा 4506 एम. अल्ताई मुश्किलले जनसंख्या भएको छ, त्यसोभए तपाईं यसलाई आधुनिक सभ्यताले अछुत पाउनुहुनेछ, र केवल जंगली प्रकृति र वन्यजन्तुले तपाईंलाई अभिवादन गर्नेछ.
साथै, यदि तपाईं एक साहसी यात्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि कुनै एक को लागी एक यात्रा 1499 अल्ताईमा हिमनदीहरूले तपाईंलाई चकित पार्नेछ. यसबाहेक, सबैभन्दा ठूलो काटुन र बिया नदीहरूमा राफ्टिंग एक महाकाव्य अनुभव हो. अर्कोतर्फ, वन्य जीवन सफारी बढी आराम विकल्प हो. तपाईं हिमचितुवा भेट्न एक दुर्लभ मौका प्राप्त गर्न सक्छ, ibex, लिन्क्स, र अधिक 300 चरा प्रजाति. पक्कै, अल्ताई एक उत्तम हो वन्यजन्तु गन्तव्यहरू युरोप मा र रूस मा भ्रमण गर्न को लागी एक अद्भुत ठाउँ.
काजान टाटरस्टन रिपब्लिकको वास्तुशिल्प स्वर्ग हो, पश्चिमी रूस. टाटर विश्वको केन्द्र भोल्गाको किनारमा अवस्थित छ, र काजान्का नदीहरू, र रूसको पाँचौं ठूलो शहर मानिन्छ.
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, काजानको मुख्य साइटहरूको आर्किटेक्चरले तपाईंको सेतो र निलो रंग र डिजाइनको साथ तपाईंको नजर समात्न सक्छ. उदाहरणका लागि, काजान क्रेमलिन, एक विश्व विरासत साइट, कुल शरीफ मस्जिद, एपिफेनी क्याथेड्रल, टाटर संस्कृतिको बारेमा बढि जान्नको लागि तपाईंले भ्रमण गर्न सक्ने केही स्थानहरू मात्र हुन्.
3. रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू: ताल Baikal
विश्वको इतिहासमा सब भन्दा पुरानो ताल, बैकल ताल बनेको छ 25 मिलियन वर्ष पहिले. यसको बरफो र विशाल सतहले साइकलियामा बैकल ताललाई जाडोको आकर्षण बनाउँदछ, र गर्मी मा, तपाईं यूरोपको स्पष्ट पानीमा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ, वा संसारमा rarest वन्यजीव अन्वेषण.
क्रूजिंग, पैदल पैदल यात्रा Baikal ट्रेल बाट प्रशंसा, वा रूसको सब भन्दा आश्चर्यजनक तालको किनारमा बार्बेक्यु, तपाईं एक दिमाग उड्ने साहसिक हुनेछ. वरिपरिका पाइन रूखहरू, टाइगा र उजाड भूमि हो रेल यात्रा नजिकको शहर इर्कुत्स्कबाट, रुसमा भ्रमण गर्न अर्को मनमोहक ठाउँ. सबै माथि बन्द गर्न, तपाइँ चीन वा रुसबाट तपाइँको बैकल साहस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्स साइबेरियन ट्रेन को माध्यम बाट, गर्मी वा जाडो.
4. सेन्ट पीटर्सबर्ग
Tsars र पौराणिक दरबारहरूको शहर, सेन्ट पीटर्सबर्गले कवि र लेखकहरूलाई प्रेरणा दिए. यदि तपाईं सेन्ट पीटर्सबर्ग जानुभएको छैन भने, तपाईले वास्तवमै रुस देख्नु भएको छैन, किनभने यो शहर रूसको सबैभन्दा प्रसिद्ध र प्रभावशाली आइकनहरू मध्ये एक हो.
हर्मिटेज, क्याथरीन दरबार, जाडो दरबार, र पिटरहफ बगैंचा, बस दम छ. प्रत्येक चरण तपाईले बनाउनु भएको एक रूसी काल्पनिक नजिक पुग्ने र तपाईं मोहित हुनेछ. सेन्ट-पीटर्सबर्गको ईतिहास र वास्तुकलाले यसलाई रुसमा अवलोकन गर्नुपर्दछ र अवश्य पनि एक शीर्षमा 12 रसियामा सबै भन्दा अचम्मका ठाउँहरू.
जंगली, विशाल, सुन्दर, र आश्चर्यजनक, कामचटका तपाईको लागि लगभग संसारको अन्तमा कुर्दै छन्. कामचटका प्रायद्वीप रूसको सुदूर पूर्वमा छ, लगभग घर 300 ज्वालामुखीहरु, धेरै सक्रिय छन्, र प्रशान्त महासागर र रूसी मरुभूमिको सबैभन्दा दिमागमा उब्जाउने दृश्यहरू. कमचटका आश्चर्यका बारे थोरैलाई थाहा छ, त्यसैले कामचटका रूसमा भ्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा अचम्मको र असाधारण ठाउँ हो.
तपाईले देख्नुहुनेछ कि कामचटका आश्चर्यजनक ठाउँहरूमा पुग्न यो सजिलो छैन, यसको टाढाको स्थानको कारण. तथापि, जब तपाईं गर्नुहुन्छ, तपाईं प्राथमिक प्रकृति द्वारा पिछा लिनुहुनेछ, प्राकृतिक आश्चर्यहरु: को तातो पानीको पोखरी, नदी, वन्यजन्तु, र पक्कै ज्वालामुखीहरु. एक ज्वालामुखी अभियान कामचटकामा गर्नका लागि सबैभन्दा चरम र रोमाञ्चक चीज मध्ये एक हो. उदाहरणका लागि, क्लाइचेभस्काया सोपका उच्च शिखर र सक्रिय ज्वालामुखी हो, कामचटका धेरै यात्रुहरूको लागि इच्छित गन्तव्य.
6. रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू: सोची
कालो समुद्री तटमा, हरियो पहाड र रिसोर्टले घेरिएको, सोची रूसमा अन्तिम गर्मी छुट्टी गन्तव्य हो. सोची यति लोकप्रिय छ कि शहर आकर्षित गर्दछ4हरेक वर्ष मिलियन मानिस, तिनीहरूको लागि गर्मीको छुट्टी समुन्द्र छेउ.
सूर्यबालीका साथै, सोची आर्बोरिटम, वा सानो इटाली, कालो सागर र सोचीको दृश्य दृश्यहरूको लागि उपयुक्त छ, र मयूरहरूको प्रशंसा गर्ने बगैंचामा हिंड्दै.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, आरामदायक बिदाको लागि त्यहाँ उत्तम ठाउँ छैन, रसिया शैलीमा, रुचि सोचीमा भन्दा. त्यसैले, यो आश्चर्यजनक होइन कि तपाईं मस्कोबाट सोची र रूसमा कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ, साथै मध्य एशिया र पूर्वी यूरोपबाट, रेल बाट.
Veliky Novgorod हाम्रो मा एक स्थान को सम्मान छ 12 सब भन्दा अचम्मका ठाउँ रूस मा. तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि महान नोभोग्रोड त्यो स्थान हो जहाँ रूस अहिले ठूलो देश भएको छ. नौंमा फिर्ता सताब्दी, Veliky Novogrod जहाँ प्रिन्स Rurik थियो, मा 862 आधुनिक रूसी राज्यको घोषणा गर्‍यो र नोभोग्रोडलाई व्यापारको केन्द्र बनायो, प्रजातन्त्र, र रूस र बाल्कन बीच साक्षरता.
त्यसैले, यदि तपाईं रूसी ईतिहासमा हुनुहुन्छ भने, Veliky Novogrod तपाईको बकेट सूचीमा हुनुपर्छ. नोभोग्रोड क्रेमलिन किल्ला, क्याथेड्रल सेन्ट. सोफिया मात्र हो2Veliky Novogrod मा अवश्य अवलोकन साइटहरू जुन तपाईंलाई चकित पार्नेछन्. का लागि खडा 800 वर्ष, केवल यहाँ कथाहरू र घटनाहरू विचार गर्नुहोस्.
8. रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू: ओल्खोन टापु
बैकल ताल धेरै ठुलो छ, कि हामीले अर्को अचम्मको ठाउँ थप्नु पर्‍यो जब हामीले रुसमा भ्रमण गर्नुपर्दछ. ओल्खोन टापु बैकल तालको सबैभन्दा ठूलो टापु हो, आकार मा न्यु योर्क शहर को समान. टापु ज home्गलमा सोच्न घर छ, चट्टानी परिदृश्य, र मात्र 150000 बासिन्दा, न्यू योर्क शहर विपरीत.
तथापि, ओलखोन टापु यात्रुहरूका लागि लोकप्रिय बिन्दु बेकाल तालमा छ. यसको मतलब ग्रीष्म youतुमा तपाईं स्पष्ट मूल तालमा पौडिन सक्नुहुन्छ र विश्वको सबैभन्दा गहिरो तालमा डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ।. जाडोमा, अर्कोतर्फ, तपाईं विश्वको सब भन्दा पुरानो तालको प्रशंसा गर्न आउन सक्नुहुन्छ, यसको जाडोको पहिरनमा, सेतोमा फ्रिज गरिएको र सुन्दर.
यो टापु सखुयुरताबाट टाढा नौका हो र बुरियटका मानिसहरूले विश्वास गर्छन् 1 Shamanic ऊर्जा को पाँच वैश्विक ध्रुव को. वास्तबमा, तपाईं टापुको मध्य भागमा शमन चट्टानहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ.
यदि तपाईं आफ्नो ट्रान्स साइबेरियन यात्रा मा हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईं इरकुत्स्कमा रोकिनुहुनेछ, पूर्वी साइबेरियाको अनौपचारिक राजधानी. 19th शताब्दी रूसी चर्चहरू, काठको खैरो र निलो रंगको घरहरू, साइबेरियन टाइगा, इर्कुत्स्क एउटा सुन्दर ऐतिहासिक शहर हो.
यसबाहेक, इर्कुत्स्क कुनै समय साइबेरियाका थुप्रै रूसी कुलीन र बौद्धिक व्यक्तिको निर्वासनको ठाउँ थियो, यदि सत्तारूढ सरकारले निर्णय गरे उनीहरू सत्ताको बिरूद्ध लागे. त्यसैले, इर्कुत्स्क र साइबेरियन टाइगाले कविता र साहित्यका रूसी धेरै कामहरू प्रस्तुत गर्दछ. तैपनि, आज इरकुत्स्क एक सुन्दर शहर हो: रोक्नुहोस् 13 काठ १ 18 औं शताब्दीका घरहरू, मुक्तिदाता चर्च, र Bronshteyn ग्यालरी केहि तपाईंले यात्रा गर्नु पर्ने स्थानहरू हुन्.
10. रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू: Stolby प्रकृति रिजर्व
येनीसी नदीको किनारमा, Stolby प्रकृति रिजर्व Krasnoyarsk शहर को ठीक दक्षिण मा स्थित छ. आरक्षित बाट सौंदर्य मा गिरदैन शीर्ष5युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर प्रकृति भण्डार. रूस भर ट्रान्स साइबेरियन ट्रेन मा लामो यात्रा पछि, तपाईं रिजर्व वरिपरि घुम्न पाउनुहुनेछ पाउनुहुन्छ तपाईंको आत्मा निद्रा शरीर र आत्मा जगाउँछ.
Stolby छ5मुख्य रंगीन कोडेड ट्रेल्स, त्यसो भए तपाई धेरै साना वन ट्रेल्समा हराउनु हुन्न. एकचोटि तपाईं जंगलमा गहिराइमा पुग्नुहुनेछ, तपाईंले रिजर्वको नाम मूल पत्ता लगाउनु हुनेछ. छन् 100 stolby - ढुy्गाको चट्टान खम्बाहरू, रूखहरू बीच stolby को प्रभावशाली र अग्लो क्लस्टरहरू.
यस सुन्दर प्रकृति पार्कको भ्रमण गर्नु भनेको आमा प्रकृतिको उत्तम आनन्द लिनु हो. रूसी वनको गन्ध र दृश्य जस्तो केही छैन, गर्मी वा जाडोमा. तथापि, यदि तपाइँ एक जाडो यात्रा को योजना बनाउनु भएको छ भने धेरै लेयर लगाउन द्रुत रिमाइन्डर, साइबेरिया धेरै चिसो र हिउँ पर्ने हुँदा.
रंगीन आर्बट, क्रेमलिन र रेड स्क्वायर, सेन्ट. बासिलको क्याथेड्रल, र मोस्कवा नदी, प्रत्येक पोष्टकार्डमा सुविधा, छवि, र मस्को बारे मा टुक्रा. तथापि, केवल तपाईं यी अद्भुत साइटहरूमा खुट्टा सेट सम्म, तपाईंले तिनीहरूको महानता र सौन्दर्यको साँच्चै कदर गर्नुभयो. मस्कोको सुन्दर आकर्षणको बारेमा कुनै प्रश्न छैन. त्यसैले, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि राजधानी एउटा हो 12 सब भन्दा अचम्मका ठाउँ रूस मा.
जबकि मास्को लुभावनी छ, मेट्रो स्टेशनहरूको भूमिगत शहर जत्तिकै भव्य छ. एउटा शहर मस्कोको भूमिगतमा पैदल यात्रा मस्को मा गर्न को लागी एक उत्तम कुरा हो. यहाँ, तपाईंले कलाको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ, डिजाइन, र प्रत्येक स्टेशन को इतिहास, साथ साथै शहर, स्थानीयबाट.
12. रसियामा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू: किझी टापु
काठका चर्चहरू, सम्पूर्ण काठको अष्टभुज घडी टावर, अद्वितीय Kizhi Pogost गठन. काठको निर्माणको यो असाधारण जटिल काम सिकर्मीहरूद्वारा बनाइएको थियो, Onega ताल मा टापु को एक मा. तपाईं जान्न चकित हुनुहुनेछ कि यस प्रकारको मोडेल प्राचीन समयमा लोकप्रिय थियो. यी काठका ठाउँहरू १ par औं शताब्दीमा लोकप्रिय परदेशी ठाउँहरू थिए, र सायद पहिले.
जबकि रसियामा चर्चहरू कुनै दुर्लभ दृश्य हुँदैनन्, काठका चर्चहरू छन्. किझी टापु रूसी कारीगरहरूको अद्भुत उदाहरण हो. Kizhi टापु एक हो यूनेस्को विश्व विरासत साइट, र संसारको आश्चर्य मध्ये एक, सम्पूर्ण जटिल रूपमा, प्राकृतिक परिदृश्यमा शानदार फिट गर्दछ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यीको लागि अविस्मरणीय यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 12 रेलमा रूसमा अचम्मका ठाउँहरू.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “ 12 तपाईंको साइटमा रूसमा भ्रमण गर्न आश्चर्यजनक ठाउँहरू ”? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Famazing-places-visit-russia%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#रसिया आश्चर्यजनक रसिया चर्च लेकबैकलरुसिया मास्को मोस्ट सुन्दर प्लेसिनरुसिया सेन्टपीटर्सबर्ग साइबेरिया TranSiberiantrain TravelRussia भिजुरसिया
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा लक्जमबर्ग, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप